Adoolessa 11, 2020
Hiriira mormii Oromoo biyya alaa Adoolessa 2020
Oromoon Amerikaa fi Awurooppaa hiriira mormiitti jiran
Oromoon biyya alaa jiran ijjeechaa Hacaaluu Hundeessaa,hidhamuu Jawaar Mohaammad, fi bulchoota siyaasaa Oromoo fi Oromoo siyaasaan hidhamaniif falmuuf hiriiratti jiran.
Warrii Jermen,Berlin karaa guddayyaa Jermen Bahaatii fi Dhiyaa gar gar kutuu irratti bahee karaa cufe akka rakkoo isaanii caqasan tolche.
“Qaamni walaba tahe ajjeechaa Hacaaluu qoratee ummataaf ifa akka godhu gaafanna,” jedhe warra hiriira kopheesse keessaa Abdiin.
Oromoon Jermen waajjira muummee ministera biyya sunii Angela Merkl,ministera haajaa alaa fi parlaamaa fi haajaa alaa biyya Jermen biyya sunii dhaqanii iyyaatan.
Akka warrii qopheesse jedhetti akka waan hiriira isaan baase namii beekuuf karaa Berlin guddayaa cufan.
“Warrii hidhame kun warra qabsoo Oromoo, mallattoo fi hayyootaa fi dura-bu'oota Oromooti.Hacaaluunis kan ajjeefame kanuuff,”jedha.
Hiriira mormii Oromoo Kanaadaa,Albertaa 2020
Kanaadaalleen tanuma keessa oolan.Warri Albertaa karaa guddaa biya isaani irra maree Alberta Legislutve building ykn bulchiinsa godina isaani gahe karaa Jasper Ave jedhaniin muree bulchiinsa magaalaatti dabree rakkoo Oromoo irra geettu jedhe himate.
Warrii MN hardhallee hiriiratti deebi’ee karaa guddayaa I-135W guutee cufee waan Oromoo irra gahuutti jira jedhe himate.
Hiriira mormii Oromoo Minisootaa Adoolessa 2020
Nezerlaandilleetti hiriiruma akkanaatti jiran.Akka warra qopheesse keessaa Naasir jedhetti jarilleen karaa gugurdaa magaallan biyya isaanii irra maree rakkoo Oromoon keessa jirti jedhe himate.
Amesterdaam,Rooterdaam,Denhaag fi fulaa akka akkaatii walti dhufe.Jarilleen akka mootummaan Nezerlaandi rakkoo Oromoo irra geettu jedhe hubatuuf gaafate.
Hoogganoota Oromoo hidhamanii fi ajjeechaa ummata sagaleen ummata Oromo,OMN cufame qeerroon hidhuu fi reebuu fi ajjeesuun itti fufeera,” jedha. Mootummaan Nezerlaandi rakko Oromoo dhagahu qaba jennee baane jedhu.
“Qabsaahotii hidhaa jiran mallattoo warraaqasa qabsoo Oromooti.Isaan hidhuun ummata Oromoo hidhuu.”
Oromoon Awustiraaliyaa ergaa teenna samiitti oli kaafne jedhan.Twitter fi lobbying[amansiifachuu] duulle,” jette warra hiriira kana qopheesse keessaa,Tolfuu Tufaa.
#JusticeforHachaluHundesa#Oromoprotests# jedhanii xuyyuura irratti barreeffama hidhanii magaallan Awustiraaliyaa irraa maaran.Akka Toltuun jettettu qileensatti hammaate malee jalqaba magaala sagal irraan maruuf karoorfatan ammallee itti deebi’uuf kurfoo jiran.
Muummeen Ministera Itoophiyaa yoo dhiyoo tana paarlaamaa Itoophiyaa irratti dubbatee fagoo taa’anii karaa cufuun qabsaahuu hin dandahan jedhe.
Warra akka laftii jeeqamuu malte jedhan jedheen ammoo “yoo akkam diqqaate siyaasaa karaa Hacaaluun kootaa du’aa qabsaahaa jedhe.Dirreen falmiin “asi tahuu isii beekuu qabdan.”